ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: လတ်တလော အဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒတွေ နှင့် ဖြစ်နေတာတွေ
ရောင်းစားထားလို့ဟေ့....:)။သူကျစာလုံးမမှားသလိုလို...။ငါ့ရည်းစာ ၁၀၁ယောက်မှာ ညိမ်းပါတဲ့ကောင်မလေး
ဘင်လာဒင် ကျန်ခဲ့မယ့် ဘဏ်စာအုပ်ကိုတောင် အစ်ကိုမောင်မျိုးက အလွတ်မပေးချင်တော့ဘူး။ ဟိဟိ
ပြောင်ချော်ချော်ကော်မန့်ပေးချင်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူးလေ.. ဒီဘလော့ကာလေးကလည်း ပြောင်စပ်စပ်ဆိုတော့ ဓါတ်ကူးသွားတာပါ။
အင်းးး မြို့ကြီးပြကြီးရောက်တာ ၄နှစ်၎လီကြာပြီ အမေရေ..
ဟယ်.. ဒါဆို သူတို့အဝှာကို ပြောင်းပြေးရတာပေါ့နော်။ အဝှာ့ကိုတောင် နှုတ်မဆက်သွားကြဘူး။ တော်တော်အဝှာဖြစ်တဲ့ အဝှာတွေ.. :D
လစာထုတ်မယ့်အချိန် ရတနာလည်း ပျော်ပါတယ်။
အမေနဲ့ ရွာကို လွမ်းနေတဲ့ မာမီရေ .. နေကောင်း ကျန်းမာ အဆင်ပြေပါစ
ချက်မှာ လှမ်းခေါ်ရင် ပြန်မပြောနဲ့ ကြားလား .. ပြောလို့ကတော့ တွေ့ပီမှတ်
ဘာလဲဟ မာမာပြုတ် ..
ဗောက်ထနေရင် ဟက်နီးနဲ့ လျှော်နော် :P
ငါ့မှာတော့ လစာထုတ်လဲ မပျော်နိုင်ပါဘူးဟာ .. ခုမြင် ခုပျောက် ဖြစ်လွန်းလို့ .. :D
ဒင်းရဲ့ အရည်အချင်းကိုလေးစားတယ်.. (ကောင်း......)။
ကျွန်တော့်ရဲ့ အရေးအသားကို သဘောကျတယ်...။
တစ်ချို့စာအုပ်တွေ အွန်လိုင်းမှာ ရှိတယ်.. သိပ်မ၀ယ်နဲ့ ထားစရာနေရာမရှိဘူး. သယ်ရလဲ ခက်တယ်..။
တော်ချက် . . . ရေးထားတာ ကောင်းလိုက်တာ . .
အင်း . . တဂ် မိထားတယ် ဒါကို ရေးရဦးမယ်။
အင်း..ဒီတဂ်ကတော့ ညီပြောသလို နဲနဲစပ်စုတဲ့ တဂ်ပဲ၊း) တဂ်တဲ့လူက အခင်ဆုံးလူတွေပဲ တဂ်ပေမယ့် ကြားထဲက ကျနော်တို့လည်း အတော်အတန် သိလိုက်ရတာပေါ့..ဟားဟား၊ ဘင်လာဒင်ရဲ့ ဘဏ်စာအုပ်ကို မျက်စောင်းထိုးနေတာတော့ သဘောကျ သွားပြီ၊ သတိတော့ထားနော်၊ ဇတ်လမ်းတွေ က မပြီးသေးဘူး၊ လိုက်နေကြတုန်းပဲ၊း) ညီတို့ဆီမှာ စာအုပ်တွေ ဈေးကြီးပေမယ့် ဝယ်လို့ရနေ တာ တော်သေးတာပေါ့၊ ဒီမှာဆို အဲဒီလို အခွင့်အရေး မရှိဘူးဗျ၊ ဒီပို့စ်လေးကလည်း ဘလော့ဂါအကြောင်း ပိုပြီးသိရတဲ့ ပို့စ်လေးတစ်ပုဒ်ပါပဲ..။
ဘင်လာဒင်စာအုပ်များရရင်လေ ကျုပ်လည်း မုန့်ကျွေးနော်
ဆွဇ်ကို အလည်သွားမယ်ဆို လိုက်ချင်သား
ကော်ဖီထုပ်တော့ သယ်သွားမှး)
မင်းစာကြောင်းတွေကလည်း အကြောင်းတိုင်းမှာ စာလုံးပေါင်းတွေမှားနေတယ်... မြန်မာစာသင်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားသားကျနေတာပဲ...
20 က ဘာတုန်းဟ.. မောင်မျိုးရယ် ကြည့်လုပ်ပါဦးကွာ။
ဘင်လာဒင်ရဲ့ စာအုပ်တော့ သဘောကျတယ် ရရင် ငါ့လဲ နဲနဲခွဲပေးနော်... :)))
ညိမ်းနိုင်.... အခုမှ လျှိုမနေနဲ့ ညိမ်းအကြောင်းရေးပါ ဒါပဲ ။
ရတနာ... လစာထုတ်ပြီးလည်း နေ့မြင် ညပျောက်ပါပဲ ညီမရယ်။
ကိုထွဋ်..... ညီက အမြဲပြုံးနေတာပဲကိုးး)
မိုးခါး...မာမားပြုတ်လို့ရေးတာဟေ့ ငါစာလုံးပေါင်းမှားတတ်တာ သိသားနဲ့နော့်း)
မိုးယံ...နင်က ဒင်းကို လေးစားတယ်ပေါ့လေ သေနာမ
ကိုဇော်..ဟုတ်လား စောင့်ဖတ်နေမယ်ဗျ ။
ကိုညီ... ဟုတ်ပါ့ စပ်စုတဲ့ပို့စ်ပဲး) ဒီမှာ စာကြည့်တိုက် သေးသေးလေးတွေလည်းရှိတယ် အစ်ကို ။
မချော.... တူတူသွားရအောင်နော့် ကိုညီ့သွားလေးကို အပြင်မှာတစ်ခါလောက်တွေ့ဖူးချင်လိုက်တာ။
နေ၀သန်... အင်းး ဟုတ်တယ် ငါက ကိုးရီးယားက မြန်မာစာသင်နေတုန်း ငါ့နာမည် ဂျောင်ဂျင်မျိုး ။
ကိုလတ်...အမလေး မကြောက်ပါဘူး အလကားရတဲ့ ဒီစာမျက်နှာလေးမှာတောင်ပြောခွင့်မရှိရင်တော့လည်း လုပ်ချင်တာသာလုပ်ကြတော့ပေါ့ဗျာ နော့်လေ ။